Iska jar - Qaabka xagaagan si xoog leh u socda | Bezzia
Goynta la jaray ayaa soo celinaysa xagaagan
Susana godoy | 13/05/2022 10:00 | Maxaan xirtaa
Waanu aragnay xitaa boqortooyadii oo waa in goynta la gooyey ay mar kale joogto mar hore la simay xilli ciyaareedkan cusub. Dharka sida dharka ama boodboodka ayaa isaga u dhiiba si aan horay loo arag. Buraashka asalka ah iyo midabka kaas oo jiri doona maalin kasta guga iyo dabcan, xagaaga la sugayay.
Waa fikrad qumman oo asal ah, kaas oo muujin doona qayb ka mid ah jidhka iyo in aanu ku dhamaystiri doono midabyo cad, oo leh daabacaad ama isku dhafan oo leh dharka ugu caansan. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad aragto ururinta wanaagsan ee waxaas oo dhan, ma jiraan wax la mid ah midka naloo soo bandhigay Stradivari, sababtoo ah had iyo jeer wuxuu ku dhuftaa ikhtiyaar kasta oo uu na tuso. Ha seegin!
1 Iska jar dharka faraantiga leh
2 Dharka daabacan oo leh qoorta ballaaran ee dhabarka
3 Dhar gaaban oo casaan ah oo xaflad ah
4 boodboodka qoorta kala goysa
5 Labbis madow oo ku rakiban
Iska jar dharka faraantiga leh
Es fikrad la mid ah midda ay xidhato Queen Letizia. Inkasta oo ay tahay gooyn ku socota isbeddelka, waa in sidoo kale la sheegaa in ay ku darayso asalka iyo qaabka weyn meel kasta oo aad talaabsato. Sidaa darteed, xitaa royalty-ku waxay ku dhiirradaan fikradda asalka ah. Xaaladdan oo kale, Stradivarius wuxuu leeyahay nooc kale oo la mid ah laakiin gacmo gaaban iyo halka caddaanku ku badan yihiin. Midab asaasi ah oo aad u macaan marka aan bilowno inaan muujino maqaarka la madoobaaday. Iyada oo maraqa evasé iyo bodice raaxo leh oo leh qoorta wareegsan, midowga labadaba ayaa kor loo qaadayaa iyada oo la gooyo iyo giraanta hore ee muujinaya taxane taxane ah. Sida?
Dharka daabacan oo leh qoorta ballaaran ee dhabarka
Goynta noocan oo kale ah waxay leedahay noocyo kala duwan. Sababtoo ah mararka qaarkood meel yar oo yar ayaa muuqata iyo kuwa kale, waxaa lagu dhammeeyaa qoorta ballaaran ee dhabarka, sida kiiska. Waxaa lagu dhammeeyaa qoor goonni ah laakiin taasi waxay u horseedi doontaa dhabarka oo qaawan. Dabcan, dharka laftiisa ayaa ah mid aad u raaxo leh, iyada oo ay ugu wacan tahay xargaha laastikada ah ee ay leedahay. Waxa kale oo lagu soo bandhigaa dhar jilicsan oo leh daabacado ubax ah oo lagu calaamadeeyay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan isku dhafka midabada. Waa mid kale oo ka mid ah fikradahaas oo aadan awoodin inaad iska caabiso xilli ciyaareedkan.
Dhar gaaban oo casaan ah oo xaflad ah
Qaabka xisbigu ma waayi karo ururinta xagaaga sidan oo kale ah. Sababtoo ah dhamaystirka satin ayaa lagu arki doonaa dharkan gaaban oo leh hooska casaanka ah kaas oo kaa dhigi doona jacayl. Dabcan taasi maahan laakiin waxay leedahay a rhinestone criss iskutallaabta taas oo siin doonta iftiin badan suudhka laftiisa. Kaliya markaad aragto, rabitaanka xisbigu wuxuu bilaabaa inuu muujiyo muuqaalkiisa. Hadda waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku buuxiso muuqaalkaaga qalabyo qalin ah oo waxaad diyaar u noqon doontaa inaad ku raaxaysato habeenada ugu fiican.
boodboodka qoorta kala goysa
Marka laga soo tago goynta lafteeda, taas oo ah jilitaanka maanta, ma iloobi karin qoorta. Waxay u muuqataa in dhamaadka halter-ku yahay jileyaasha ugu weyn ee isbeddelka sidan oo kale ah. Maadaama aan aad u heli karno lebbiska sida daanyeerka. Hadda kuwa dambe waa jilayaasha, sababtoo ah waxay sidoo kale lagu arki karaa labadaba midabada aasaasiga ah iyo hooska firfircoon. Dhamaadka lugaha ballaaran, waxay ku fiicnaan doonaan inay xirtaan waqtiyo kala duwan oo maalintii iyo habeenkii ah.
Labbis madow oo ku rakiban
Labbiska madow waligiis ma guuldareysto Sababtaas awgeed, Stradivarius sidoo kale waxay leedahay teeda aan jecelnahay. Sababtoo ah waxay leedahay dhammaystir ku habboon, kaas oo ku habboon silhouette-kaaga oo u qeexi doona si aan weligeed hore loo arag. Marka laga soo tago goynta labada dhinac ee dhexda oo aan aragno wax badan iyo in, mar kale, loo soo bandhigo si qarsoodi ah. Waa fikrad fiican in lagu xidho noocyo kala duwan, taas oo ku xidhan qalabka aad ku darto. Taas waxaan u dhaafnay doorashadaada!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Goynta la jaray ayaa soo celinaysa xagaagan
Dusha sare ee Crochet, isbeddel xagaaga